နေ့နံအားလုံးအတွတ် စိတ်နေသဘောထားနှင့် အချစ်ရေး အရမ်းမှန်လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော် – Alanzayar
နေ့နံအားလုံးအတွတ် စိတ်နေသဘောထားနှင့် အချစ်ရေး အရမ်းမှန်လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်
နေ့နံအားလုံးအတွတ် စိတ်နေသဘောထားနှင့် အချစ်ရေး အရမ်းမှန်လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်တနင်္ဂနွေ သားသမီးများရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနှင့် အချစ်ရေးသင် တနင်္ဂနွေ သားသမီးလေးတွေကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်းပေမဲ့ အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတတ်ကြပါတယ်။
တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေဟာ စာဖတ်ဝါသနာ ပါကြတယ်။ ဗဟုသုတကို လိုက်စားတယ်။ အအိပ်မက်တယ်။ အစားမကြီးဘူး။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ စားနေတတ်တာမျိုး၊ ဒေါသကြီးပေမယ့် ကောက်ရိုးမီးလိုမျိုး၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ပြေလွယ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ဟာ ချစ်စရာကောင်းနေပြန်ရော၊ ချစ်သူအပေါ် အနိုင်ယူလိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ကိယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်စိတ် အလိုအကျအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့ သူမျိုး၊ အရမ်းလဲ ချစ်တတ်ကြတယ်။ အချစ်ကြီးပြီး အချစ်အတွက်ဆို တဇွတ်ထိုးနိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် အချစ်ရေးမှာ ကံညံ့တယ်လို့ နည်းနည်း ပြောရမယ်။ ဦးဆောင် လိုစိတ် ပြင်းပျတယ်။
နေရာတကာ ဆရာကြီးလုပ်တဲ့ သူမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အပြည့်အဝ ရှိသူတွေပါ။ မိသားစုကိုလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ အပေါင်းအသင်း မက်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် သူတို့က ဦးစားပေး နံပတ်တစ် ဖြစ်ချင်တဲ့ သူမျိုးတွေပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် အမြဲ အနစ်နာခံတတ်တယ်။ ခံစားရတာတွေကိုလဲ မျိုသိပ်ထားတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အများရှေ့မှာ ပြုံပျော်နေပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာ တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ပြီး ခံစားတဲ့ သူမျိုးတွေပါ။ အထူးအခြားဆုံး အချက်က တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အစွဲအလမ်း ကြီးလွန်းတာပါပဲ။
တနင်္လာလေးများသာ ရှယ်ရန်– တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိရှိနဲ့နေတတ်ကြတယ်။ခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်ပေးတတ်သူလေးတွေပါ။အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပျော်ရွှင်စရာတွေလဲဖန်တီးပေးတတ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတနင်္လာသားသမီးတွေကလူချစ်လူခင်ပေါများကြတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုခုမြင်ရရင်သနားတတ်တယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးလဲကူညီပေးလေ့ရှိကြတယ်။
သူတို့ဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်။ အားနေတဲ့ အချိန်မှာ စာဖတ်တာမျိုး ဗဟုသုတတွေ လေ့လာတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတွေကြောင့် အလုပ်လုပ်ရာမှာလဲ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိကြတယ်။ မှန်နေရင် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်သလို မှားနေရင်လဲ တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘူးဆိုရင် ဖရုံမသီးဘူး ။ သူတို့အပေါ် ကောင်းတဲ့ သူတွေဆိုရင် သံယောဇဉ်ရှိစွာ ခင်မင်တတ်ကြတယ်။ ချစ်မိ ခင်မိပြီ ဆိုရင် အသေးအဖွဲ့လေးကအစ ဂရုစိုက် တတ်ကြတယ်။ အရမ်းလဲ ချစ်တတ်တယ် ။ကိုယ့် ချစ်သူငြိုငြင်မှာ သေမတတ်ကြောက်ကြတယ်။ အစွဲ အလန်းကြီးပြီး တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် အပေါ်မှာပဲ စွဲလမ်းနေတတ်ကြတယ်။
တနင်္လာလေးတွေက စကားပြောရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိကြတယ်။ နဲနဲ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ပြဿနာ တစ်ခုခုဆိုရင် ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ ဖြေရှင်း တာပဲ ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် အမြန် မဆုံးဖြတ်စေချင်ဘူး။ ( မှန်ရင် share သွားကြပါ )
အင်္ဂါ သားသမီးတို့၏ စိတ်နေစိတ်ထား– အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်း သဏ္ဍန်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ နဲ့နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန် မှဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေဖြစ် ကြတယ် မဟုတ်ရင် မခံချင် ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲ ကြတာထက်ပါးစပ်က ပူညံပူညံ နဲ့ရေရွတ်နေ တတ်ကြ တယ်လူတွေ အပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ် ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန် အလှန်လှန်တွေးပူနေ တတ်ကြ တယ်။
မိသားစုတွေ အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ရှိကြတယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်တတ် ကြတယ်။အလုပ်လုပ် တဲ့နေရာမှာသူများအပေါ်ဦးဆောင်လိုတဲ့ စိတ်ရှိ တယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင် တတ်ကြတာ အင်္ဂါ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်။အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရှိတယ်တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ် သူများတွေမြှောက်ပေးရင်တော့ သိပ်မကြိုက် ဘူး။
စကားပြောရင်လည်း သူများ နားလည်အောင် ရှင်းလင်းစွာနဲ့ ပြောပြ တတ်ကြ တယ်။အမှတ်တရတွေကိုတော့ တခုမကျန် မမေ့တတ်တာအင်္ဂါပါပဲသီချင်းအေးအေးလေးတွေဆို တည်ငြိမ်အေးချမ်း တဲ့နေရာမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ် နားကျပ်နဲ့နားထောင်နေ ရတာတွေကို နှစ်သက်ကြ တာအင်္ဂါပါ။အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေဟာ အမြင်မှာ မထူးဆန်းဘူးထင်ရပေမဲ့ တကယ်တော့ အများနှင့်မတူတဲ့အချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူတွေ ပါ။ သူတို့ဟာ အနေအေးတယ် အရှက်အကြောက်ကြီးတယ် .စိတ်ရင်းကောင်း သလောက် အားနာလည်းကြီးတတ်ကြတယ်
လူစိမျးတှနေဲ့ ဆိုမာနကွီး သလိုလို နတေတျ ကွပမေဲ့။ သူတို့နဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှနေဲ့ကွတော့ ကလေးလေး တဈယောကျလို အမွဲပြောျရှှငျနေ တတျကွတယျ ရိုးသားကွတယျ မြားသောအားဖွင့ျ။့စကားနညျးတယျ လူအမြားကွီးရှေ့မှာဆို စကားသိပျမပွောပမေဲ့ သူတို့ရငျးနှီးတဲ့သူတှနေဲ့ဆို ဖောငျဖှဲ့အောငျပွောနေ တတျတဲ့ သူမြိုး ရိုးရိုးလေးနေ ရတာကို သဘောကြ တယျ ဒါပမေဲ့ ခတျေနဲ့။လြောျညျီအောငျလညျး ဝတျတတျ စားတတျနတေတျ ထိုငျတတျ ကွတယျ အခစြျရေးမှာ ကံကောငျးကွတယျ ခစြျသူခငျသူလညျး ပေါတယျ။
ချစ်သူရဲ့ အလိုလိုက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတ တ်တယ်တကယ် ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ရလိမ့်မယ်ရည်းစားမများ ဘူးဆိုပေမဲ့ နှစ်ယောက်။သုံးယောက် ထားပြီးမှ အချစ်စစ်ကို တွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ကို ခင်တဲ့သူပေါကြတယ်အထူးသဖြင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ ရိုးသားခြင်းကို သဘောကျပြီး မိတ်ဆွေပေါတာ ဖြစ်တယ် အနုပညာကို နှစ်သက် တယ်။အရမ်းကြီးတော့ မရူးသွပ်ဘူး ဘယ်အရာ ကိုဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကြီး အစွဲအလန်းမထားဘူး ဒါ့ကြောင့် သိပ်ပြီး မခံစား ရတတ်ဘူး။
အထူးသဖြင့် သူတို့လေးတွေက အလုပ်လုပ်ရမှာ ပျင်းတတ်ကြ တယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့ စိတ်ရှိတဲ့ အချိန် ဆိုလည်း မငြီးမငြူ လုပ်တတ်ကြတယ် ။
အအိပ်မက်တယ် အစားမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့ အသင့်အတင့်စားတတ်တဲ့သူမျိုးသူတို့လေးတွေဟာ အရမ်းရိုးသားကြတဲ့ အတွက် ချစ်စရာကောင်းကြ တယ် မိသားစုမှာ သူတို့လေးတွေက အရေးပေး ခံရတယ်။အထူးခြားဆုံးကတော့ သူများတွေထက်ရိုးသားတာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါကြတယ်။( မှန်ရင် share သွားကြပါ )
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်နော်နေ့နံတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေဟာ စိတ်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း ကြားဖူးနားဝရှိပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ ခံစားချက်နဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူး သမီးလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
(၁) အနေအထိုင်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေဟာ ဆတ်ကော့လက်ကော့ထဲမှာတော့ လုံးဝမပါပါဘူး။ အဲလိုပြောလို့ အရမ်းအေးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အရမ်းနေတတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ။ သူတို့လေးတွေဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ မဆို အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းသင်နိုင်သလို၊ ဘယ်လိုအလွှာက လူတွေနဲ့မဆို တစ်သားတည်း ကျအောင်နေတတ်တဲ့ အနေအထိုင် တတ်သူလေးတွေပါ။
(၂) ခေါင်းမာတယ်သူတို့လေးတွေရဲ့ ခေါင်းမာချက်ကတော့ တော်တော်များများလည်း ကြားဖူးနားဝ ရှိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ သူတို့လေးတွေဟာ သူတို့မလုပ်ချင်တာကို အတင်းလုပ်ခိုင်းလို့ မရသလို၊ သူတို့လုပ်ချင်ပြီ ဆိုရင်လည်း တားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ခေါင်းမာတာလေးကြောင့် တစ်ခါတလေ နောင်တရတာလေးတွေ ရှိပေမယ့် ဘယ်တော့မှ နောင်တရတယ်လို့ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။
(၃) အမိန့်ပေးတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေ အမုန်းဆုံးကတော့ သူတို့ကို အမိန့်ပေးတာ၊ လေသံမာမာနဲ့ ခိုင်းတာ၊ ဆူတာငေါက်တာ လုံးဝလုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး။ သူတို့လေးတွေဟာ စိတ်ထားအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလေးမှမကျောလိုက်နဲ့ လုံးဝအကျောမခံတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့လေးတွေက စိတ်ပျော့တဲ့အတွက် လေသံချိုလေးနဲ့သာပြောလိုက် အနစ်နာခံပြီး အကုန်လုပ်ပေးမယ့် သူလေးတွေပါ။
(၄) မလိမ်နဲ့သူတို့လေးတွေကို သွားပြီးလိမ်ဖို့ မကြိုးစားလိုက်ပါနဲ့။ လိမ်တာထက်စာရင် အမှန်အတိုင်း ပြောလိုက်တာ သင့်အတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လွယ်လွယ်လိမ်လို့ မရသလို၊ သင်မလိမ်ခင်ကတည်းက အမှန်ကို သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်တာကြောင့် သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ချင်ရင်တော့ ရိုးသားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ သူတို့လည်းသူများကို မလိမ်သလို၊ သူတို့ကိုလိမ်တာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။
(၅) အချစ်ကြီးတယ်သူတို့လေးတွေက အချစ်ကြီးလွန်းလို့ မကြာခဏ နာကျင်ရတဲ့သူလေးတွေပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့မချစ်တတ်သလို၊ တစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်လည်း သူမှသူ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ရူးနေအောင် ချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါ။ အချစ်အတွက်ဆို မလုပ်ရဲတာလည်းမရှိသလို၊ သူတို့တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ချစ်သူအတွက် ပေးဆပ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်ရေးမှာ နာကျင်ရတာများပါတယ်။( မှန်ရင် share သွားကြပါ )
ကြာသပတေးသားသမီး– ကြာသပတေးသားသမီးတွေက ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ သူတွေအပေါ် အားထားနှစ်လိုစိတ် ရှိကြတယ်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူဘဝကို ပိုမို ပျော်မွေ့တတ်ကြတယ်။ အတတ်ပညာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာ ဝါသနာကြီးတယ်။ ရယူလိုစိတ် ထက်သန်ကြတယ်။ သူတို့ယုံကြည်တဲ့ ဆရာသမား မိဘများအပေါ် အလွန်ကောင်းကြတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြသူတွေပေါ့။ အရမ်းစိတ်ညစ်ရမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ရှောင်ခွာတတ်ကြတယ်.. ပေါ့ပါးရွင်လန်း လိုစိတ် ရှိတယ်။ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လိုစိတ် ရှိကြတယ်။ ဝါသနာအလျောက် ဓာတ်ပုံရိုက် ဗွီဒီယိုရိုက် မှတ်တမ်းတင်တာတွေ သဘောကြတတ်တယ်။ အရည်အသွေး ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ ကျီစယ်လိုစိတ် ရှိတတ်ကျတယ်။ အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထက်မြက်တယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာ လုပ်ရင် တော်တယ် ထက်တယ်။
မျော်လင့်ချက်ကြီးတယ်။ အကူအညီးပေးတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်တာ ဝါသနာပါတယ်။မာနကတော့ အရမ်းမကြီးဘူး။ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် လွယ်တယ်။ အားနည်းချက်အနေနဲ့ ယုံကြည် လွယ်တတ်တယ်။ ရှုပ်ပွေတာကို မုန်းတယ် သစ္စာတရားကို တန်ဖိုး ထားတတ်တဲ့စိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ ပညာရေး ကောင်းတယ်။ ရုပ်ချောချော မချောချော စတိုင်ရှိခေတ်မှီနေရင် ငယ်ရွယ်ပြီး သွက်လက်တဲ့ သူတွေကို သဘောကြနှစ်သက်ကြတယ်။
ခေတ်မှီ စတိုင်ရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင် မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်မိတတ်တဲ့ ခလုတ်လေးက မွေးရာပါ ပါလာတဲ့သူမျိုး။ ရောဂါခံစား ရလွယ်တယ်။ သူတို့ဟာ ငယ်ရွယ်ချိန်မှာဆို စကားပြောနှေးတယ်။ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးတတ်ကြတယ်။
အသက်ကြီးချိန်ဆို သတိထားကြတာ အကောင်းဆုံး။ မတော်တဆမှု ဖြစ်လွယ်တယ်။ စိမ်းစိုနေတဲ့နေရာကို နှစ်သက်ကြတယ်။ သံယောဇဉ် ကြီးတယ်။ စိတ်ရှည်သည်းခံ တတ်တယ်။ ပြတ်သားတယ်။ ဘဝကိုပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးတတ်ကြတယ်။ ပညာနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ကြီးကြီးသေးသေး လေ့လာတယ် လိုက်စားတယ်။ အတွေးအမြင်က ခိုင်မာတယ်။ မိမိနဲ့ သိပ့်ဟန်မကျရင် ဖျက်ဆီးတတ်တယ်။ ထိမ်းသိမ်းတာကို ဝါသနာပါတယ် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတယ်။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမျိုးကိုမှ နေရာယူတတ်တယ်။
လျို့ဝှက်ပြီး နေတတ်တယ်။ သိုသိပ့်ကျစ်လစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကို သူများနဲ့ထပ်ကျ အောင်လုပ်ဆောင်တတ်တယ်။ သူတစ်ပါး ဒုက္ခပေးတာ အကြိမ်ကြိမ် ခံရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ရန်လိုတိုက်ခိုက်လာရင် သိုသိပ့်ပီး ထိုးနှက်တတ်တယ်။ ရှောင်ရှားတတ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံ ပြောဆိုနေကျတဲ့ သူတွေကို သူတို့ အလေ့အကျင့်အတိုင်း လိုက်လျော နေတတ်တယ် သိတတ်တယ်။ လူချစ်လူခင် ပေါများတယ်။
အချစ်ကြီးတယ် အမြတ်လဲကြီးတယ်။ သစ္စာရှိတယ် ကတိတည်တယ်။ စိတ်ရှည် သည်းခံတယ်။ မိသားစုအပေါ် အရမ်းသိတတ်တယ်။ မိဘတွေက အားကိုးကြတယ်။ နှစ်လိုတယ် အပေါင်းအသင်းပေါများတယ်။ မာနကြီးတယ် ထင်ရပေမဲ့ ပေါင်းမိရင် အရမ်း စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝတတ်တယ်။ အချစ်ရေးအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့ အချစ်ရေး သင့်မြတ်နေသူပါပဲ။( မှန်ရင် share သွားကြပါ
သောကြာသားသမီးများအတွက်သောကြာလေးတွေကို ချစ်ပါ သူတို့ကအရမ်းချစ်တတ်ကြသလိုအချစ်လည်းကြီးတယ်သူတို့ကမျက်ရည်လွယ်ပေမယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရှေ့ရောက်ရင် အဆင်ပြေသလိုဟန်ဆောင်ပြုံးပြတတ်ကြတယ်သောကြာလေးတွေကို ချစ်ပါ . . .ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုဆုံးရှုံးရမှာအရမ်းကြောက်တတ်ကြတယ် ……သူတို့က စိတ်နည်းနည်းကြီးပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအပေါ်ဆိုရင်အလျှော့ပေးပြီးတော့ကိုချစ်တတ်ကြတာ သောကြာလေးတွေကို ချစ်ပါ သူတို့ကတစ်ခါတစ်ရံဆိုးတတ်ကြပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကချော့ပြောရင် အရမ်းလိမ္မာသွားတတ်ကြတယ်
သောကြာလေးတွေကို ချစ်ပါ . .အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန် ရှေ့မှာဘုဂလန့်ပြောတတ်ပေမယ့်အတွင်းစိတ်ထဲ ကနွေးထွေးပြီးဂရုစိုက်နားထောင်တတ်သူတွေပါကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဆို ဘာမဆိုကြိုးစားလုပ်ပေးတတ်တယ်…ဒါကြောင့် သောကြာလေးတွေကို ချစ်ပါ . . . တစ်သက်လုံး စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီး အချစ်ခံရပါလိမ့်မယ်……( မှန်ရင် share သွားကြပါ )
စနေသားသမီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားစနေသားသမီး များဟာ အချစ်ကြီးတယ်။ သံယောဇဉ် ကြီးတယ်။ ချစ်သူ ဖေါက်ပြန်ရင်တောင် ခွင့်လွတ်နိုင်တတ်တယ် ။ အပြောကောင်းတယ်။သဘောကောင်းတယ်။သဝန်တိုတတ်တယ်သူများ ထက်ပိုပြီး သဝန်တို တတ်တယ် ။ ကိုယ်ကတော့ မစဘူး ။ ကိုယ့်ကို စ လာရင် ပါပါ သွားတတ်ပါတယ်။ လက်သာ ရင် လိုက်တဲ့ကလေး လိုပဲ ။ ပိုဂရုစိုက်တဲ့ သူနောက် ပါ ပါ သွားတတ်ကြတာ စနေသားသမီးပါပဲ
စနေနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ပိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပေတော့ ။နောက်တစ်ခု က စနေသားသမီးက ကြာရင် ငြီးငွေ့သွားတတ်ကြတယ် ။စနေသားသမီး နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ၂ နှစ်လောက် သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီးရင် ယူချင်စိတ် လျော့သွားတတ်ကြတယ်။အဲဒီတော့ စနေသားသမီး နဲ့ ကြိုက်ရင် တစ်နှစ်အတွင်း ယူဖို့သာလုပ် နို့မို့ဆို မယူဖြစ်ပဲ ဇတ်မြောဖြစ်သွားတတ်ပါ တယ်။စနေသား သမီးများ သတိုးသား ဖြစ်စေ၊ သတိုးသမီး ဖြစ်စေ စိတ်စေတနာကောင်း၊ စိတ်ရင်းကောင်း၊ ပင်ကိုယ် ဗီဇာ ကောင်းတတ်သည်
စနေတွေက အရာရာကို စိတ်အေး လက်အေးဖြင့် ဝေဖန် သုံးသပ်၍ စဉ်းစားဆင်ခြင် လုပ်ကိုင်တတ်သည်။ အမှားအမှန်ကို မိမိဖညသာ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ် တတ်သည်။စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝကြတယ်။ စိတ်ထား ကောင်းကြတယ်။စိတ်ဒုက္ခ ရောက်နေလျှင် မိမိဖာသာ ကြိတ်မှိတ် ခံစားရတတ်သည်။သင်ဟာ စနေသားသမီးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေပီ ဆိုရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့ သူတို့ကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ။စနေသား သမီးတွေက သူ့ရဲ့ချစ်သူကို ပျော်ရွှင်အောင် ထားကြတယ်။
သူ့ချစ်သူကို စိတ်ညစ်စေမယ့် အပြုအမူမျိုးကို လုပ်လေ့ မရှိဘူး။တကယ်လို့ သူ့ချစ်သူက အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ညစ်နေရင်လည်း ပျော်ရွှင်လာအောင် လုပ်ပေးတတ်ကြတယ်။ ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ ဗီဇလို့ ပြောရမှာပေါ့။နည်းနည်းတော့ စိတ်ကြီးကြတယ်။ တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သည်။ ချစ်ရင် နှစ်ယောက်မရှိ၊စိတ်မြန် ကိုယ်မြန်၊ မဟုတ်မခံ ၊ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်တာ စနေပါ။
သူတို့ကို မဟုတ်တာ ပြောရင် မကြိုက်ကြဘူး။ အောက်ကျိုး မခံတတ်။စတာပဲဖြစ်ဖြစ် အတည်ပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ကြဘူး။ဒါမယ့် စိတ်တိုတဲ့ အချိန်ကလည်း နာရီဝက်တောင်မကြာဘူး။အချစ်ကြီးကြတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ပီဆိုရင် သူ့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကို မကြည့်ဘူး ရူးရူးမူးမူး စွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်တတ်ကြတယ်။သူ့ချစ်သူရဲ့အတိတ်က မကောင်းဘူး ဆိုရင်တောင် lအနာဂတ်မှာ သူ့ချစ်သူကို သေချာတိုင်ပင်ပြီး ပြုပြင်ပေးတတ်ကြတယ်။ရုပ်ရည်အားဖြင့် ရုပ်ဆိုးတဲ့သူ မရှိကြဘူး။ ရှိခဲ့ရင်လည်း နည်းတယ်။
ရုပ်ရည် အသင့်အတင့် ရှိတဲ့သူကလည်း သူ့ရဲ့ဖက်ရှင် နဲ့တင် ကြွေလောက်တယ်။ရုပ်ချောပီ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီဘူး။ အရပ်အားဖြင့် အရမ်းလည်း မရှည်ဘူး။အရမ်းလည်း မပုကြဘူး အနေတော်လေးနဲ့ ချစ်စရာ အရမ်းကောင်းကြတယ်။စကားပြောတဲ့ အချိန်တို့ ရယ်လိုက်တဲ့ အချိန်တွေကတော့ အလှပဆုံးနဲ့ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေပါပ။ဲစနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကိုစရောက်ပီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ် ဒေါသဖြစ်ပီဆိုရင်လည်းအရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်
ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက်မပြောတတ်ဘဲတိုက်ရိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တာ စနေပါအစွဲအလန်းကြီးတယ် အမှတ်တရတွေကိုသတိရနေတတ်တယ်ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်ကြဘူးဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့မတူအောင်ပါပဲစိတ်ကြီးတယ်မဟုတ်မခံတတ်ဘူး အချိန်ခနလေးနဲ့ဒေါသအရမ်းထွက်တတ်ပေမဲ့ဟုန်းခနဲထတောက်တဲ့မီးလိုပဲ ဒေါသတွေကခနပဲ ကြာကြာတော့စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်သနားတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိကြတယ်မျက်နှာတည်ပီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့စိတ်ထားစနေမှာအပြည့်အဝရှိတယ်
အနေအေးပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလာခင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆို ဖော်ရွေစွာနေတတ်တာစနေပသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ် ခင်မင်မှုတွေကိုလည်းလိုချင်ကြတယ်မိသားစုတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်းခံချင်ကြတာလည်း စနေပါစိတ်ဆိုးနေရင်မျိုသိပ်မထားတတ်ဘူး ဖွင့်ပြောမိတတ်တယ် ပြောပီးရင်လည်း အကြောင်းတခုကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားတတ်ပီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်တာလည်းစနေပါဘဲချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပီးမခေါ်ကြရင်ကိုယ်ကဘယ်တော့မှအရင်စမခေါ်ချင်ကြဘူး မာနအိုးတွေပါသူ့ဘက်ကစခေါ်ပီဆိုရင်လည်း သူ့ထက်2ဆခင်မင်ပြတတ်တာစနေခင်ရတဲ့သူတွေကိုကိစ္စတွေတိုင်းမပြောပြတတ်ဘူးအချို့သောအရာတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတတ်တယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းကိုလက်ကြောတင်းအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ကြပါတယ်
ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းပြောတာဘဲ ခံချင်ကြတာလည်းစနေပဲသီချင်းတွေ ဒဏ္ဍရီစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်တွေကိုနှစ်သက်ကြတယ်တခါတလေ တယောက်ထဲရှိရင်သီချင်းတွေညည်းနေတတ်တယ်အိမ်မက်တွေကိုလည်း အမျိုးမျိုးအထအနကောက်တတ်ကြတယ်အမျှော်အမြင်ကြီးတယ် တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေအင်မတန်ရှိတယ်စိတ်သဘောထားကောင်းတတ်ကြတာ စနေပါအချစ်ရေးမှာတော့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မြတ်နိုးမှု အချစ်တွေကိုခံရပေမဲ့ခေတ္တယာယီတော့ ဝေးနေတတ်ကြတယ် Credit
Previous Article လိုင္းေပၚနာမည္ႀကီးေနတဲ့ ယြန္းယြန္းနဲ႔စည္သူဝင္းတို႔ေဖာက္ျပန္ထားတဲ့ HD ဖိုင္..1
Next Article မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူသော “အနန္တရေတော်”